Neorruralism maka mbinye aka ikpeazụ nke ụlọ obibi akwụkwọ Caballo de Troya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ana Lena Rivera Muniz | | Akwụkwọ akụkọ
Neo-naturalism, ihe odide nke ide akwukwo n’agha, onye nketa nke ndi nwe ya dika Cela na Delibes.
Anyịnya Troy bụ akara nke gigantic Penguin Random House bipụtara otu, nke nwere obere echiche nke ịrụ ọrụ dịka obere ụlọ obibi akwụkwọ nweere onwe ya, kara aka choputa onyinye edemede ohuru ndi n’agha, ma ọ bụ nke ka ukwuu, nke njirisi azụmahịa nke oge.
Kwa afọ, onye isi nchịkọta akụkọ na-ahụ maka ịhọrọ akwụkwọ isii nke ndị edemede isii. Ndị editọ, ndị ode akwụkwọ ama ama na ụwa agụ akwụkwọ, Elvira Navarro (2015), Alberto Olmos (2016), Lara Moreno (2017) na Mercedes Cebrián (2018).
1 Pilar Fraile, Uru nke Ndụ Obodo.
3 2019: Dị ka afọ ọ bụla, adreesị ọhụrụ na Trojan Horse.
Pilar Fraile, Uru nke Ndụ Obodo.
Ọrụ kachasị ọhụrụ a ga-ewepụta ya na ụlọ obibi akwụkwọ Caballo de Troya, nke Mercedes Cebrián dere, bụ akwụkwọ ọgụgụ neo-naturalist Uru ndụ obodo baraby Pilar Fraile.
Pilar Fraile Amador (Salamanca, 1975), prọfesọ nke nkà ihe ọmụma na Baccalaureate na dọkịta na Theory of Literature si UCM, bụ onye edemede onye biputara uri, akuko na edemede.
En Uru nke Ndụ Mba, onye ode akwukwo a na eche ihu ndi ime obodo na ndi ohuru na-agbapu obodo a n’uche ndu ozo, ohere na okike, ebe ị ga-agba ọsọ mgbe ụbọchị na-adịghị agwụ agwụ na ụlọ ọrụ emechiri emechi na mbara ala. A akwụkwọ akụkọ na na-enyocha mmekọrịta chiri anya nke mmetụta, enweghị ntụkwasị obi, obere ihe ndị dị mkpa na-adị ndụ kwa ụbọchị biri n'ime dị ka ọdachi. Ma ọ bụ na udo ma ọ bụ enweghị obi erughị ala na mmụọ anyị enweghị ike ịgbapụ site na ịmegharị.
Neo-naturalism, site n’aka Pilar Fraile, yana Uru ndụ na ime obodo.
Neo-naturalism bu a ije edemede ọhụrụ, XXI narị afọ, onye nketa nke ochie nke narị afọ gara aga, dị ka Miguel Ndị ahịa o Camilo Jose Cela. Site na nketa ụfọdụ site na gburugburu mmegbu ahụ nke nne na nna nke ụdị a, Pilar Fraile na-ebuga akwụkwọ na ụlọ obibi ndị e wuru n'etiti enweghị ebe na ndi ohuru onu ogugu na esi n’obodo aga obodo bụghị ndi meriri site na ọganihu ezigbo ala, nke dị nso na nnukwu obodo ka ọ ga-ekwe omume ma, n'otu oge ahụ, ọ ga-adịrịrị nke ọma iji nọgide na-ebi ndụ "ime obodo" nke ọtụtụ ndị bi n'obodo ukwu na-achọsi ike na ọbụna akụkọ ifo dịka ọ dị Uru ndụ obodo bara.
N'ebe ndị gara aga na agbata obi, a zụlitere na obere ụlọ na-ewu ewu, nke jupụtara na mpaghara ndị a na-apụghị ịkọwapụ ibe ha na ibe ha, bụ ebe enweghị oghere gbara ndị nzuzo gburugburu. Uru dị na ibi na mba ahụ, Alicia na Andrés, Ha naachọ n’ime obodo ụdị ndụ ha gaara achọ ibi n’obodo, ịghọ ndị bịara abịa na ebe abụọ ahụ, n'etiti onwe ha na maka onwe ha. Naanị nwa ya nwanyị, obere Miranda, nwere ike ibufe obi ụtọ ya ebe ọ bụla a kpọgara ya.
Jannyịnya Trojan abanyela n'oge a maka akwụkwọ chiri anya, na-eche echiche, njirimara nke akara, zuru oke iji gụọ n'ehihie nke ịdị umengwụ na umengwụ.
2019: Dị ka afọ ọ bụla, adreesị ọhụrụ na Trojan Horse.
Na 2019 nhọrọ nke ọrụ isii a ga-ebipụta ga-adị n'aka mmadụ abụọ, Luna Miguel na Antonio J. Rodríguez. Ebumnobi? Nye olu ndị edemede a mụrụ na ngwụsị nke iri asatọ na itoolu, ndị na-abụghị akụkọ ifo, feminism na dị ka mgbe niile, akwụkwọ okpukpe ndị na-adabaghị na sekit na-ebipụta akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ akụkọ » Neorruralism, site n'aka Pilar Fraile, mbinye aka ọhụụ nke ụlọ obibi akwụkwọ Caballo de Troya.